20-ka January oo loo aqoon-saday maalinta ay furmayaan ciyaaraha gobollada Puntland. – Radio Daljir
Garowe, January, 07 ? Wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland C/wali Xirsi Cabdulle ?Indho-guran? oo u waramay radio Daljir ayaa si toos ah markii ugu horoysay u shaaciyay 20-ka January 2012 inay ku beegan-tahay xilligii ay furmi lahaayeen ciyaaraha gobollada Puntland.
Md. C/wali ayaa mar uu ka hadlaayay dib u dhacii ku yimid ciyaaraha gobollada Puntland arrintaasi sabab uga dhigay shirkii heerka qaran ee Dastuurka oo ku soo beegmay xilligii loo asteeyay in la qabto ciyaaraha gobollada.
Wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland mudane C/wali ayaa shaaca ka qaaday inay kulan la qaateen dhammaan guddoomiyaasha ciyaaraha gobollada Puntland, isla markaana ay sameeyeen guddiyo kale duwan oo ka shaqayn-doona qabsoomida ciyaaraha gobollada Puntland.
Hadalka wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland C/wali Xirsi Cabdulle ?indho-guran? ayaa kusoo beegmaya, xilli muddo 2 jeer ah ay baaq-deen ciyaarihii gobollada, taasi oo sabab madaxdu uga dhigeen shirar ka muhiim-sanaa ciyaaraha oo kusoo beegmay waqtigii loo asteeyay inay ciyaaruhu dhacaan.